China YF-T18 na-enye gị ohere oghere velvet efu Manufacturer na Supplier | Yifan
YF-T18 na-enye gị ohere oghere velvet efu
Ihe owuwu nke igwe, marble faux, osisi siri ike na PU akpụkpọ anụ na-akwado nkwado siri ike, ojiji na-adịgide adịgide na ahụmịhe nkasi obi maka afọ ndị na-abịa. Guzo n'ụlọ gị.
Isiokwu oge 800mmL x400mmW x780mmH
Na-agwakọta ịma mma nke velvet na mgbakwunye nke ihe eji eme akwa, nke a na-agbakwunye ụma nke okomoko. Enwekwara ogwe aka nke ọla edo na elu iko iji mezue anya ahụ. Igwe iko a na-ejigide nke dị mma, isiokwu nke oge a ma mepụta ihu ọma maka enyo, nchekwa etemeete na ndị ọzọ. Abụọ úkwù na na na na ọkaibe ịlesụ. The kacha, okomoko ọrụ ohere-ma ọ bụ gbanyụọ nke ogbo.
Enwere ike ịhazi agba akpụkpọ anụ, ebe enwere ike ịhazi agba okpokoro na oji. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Odi na: acha ọcha, turquoise, graphite, turquoise gbara ọchịchịrị, odo, isi awọ, isi awọ, pink dusky, karama green, Mint, red, sky blue, acha anụnụ anụnụ, acha anụnụ anụnụ, coral dị ndụ.
Nke gara aga: YF-T17 zuru oke maka obere oghere Oghere efu
Osote: YF-T19 Black N'ogige atụrụ na-enyo
YF-T14 tụgharịa Top Mirror drawer ọla kabinet ...
YF-T23 Nnukwu ihe ntanye etemeete efu + TV guzo kabinet